Fikarohana momba ny firaisana Toetran'ny fiainana taloha, ny fitadidiana ny fiainana taloha sy ny fiainana an-tany taloha tao amin'ny raharaha famerenana indray ny Tiorka an'i Ahmet Delibalta | Erkan Kilic - Fikarohana Reincarnation
Notadiavin'ny: Ian Stevenson, MD
From: Ireo trangan-javatra momba ny karazana gay vaovao, Boky III, Ireo tranga roa ambin'ny folo ao Libanona sy Torkia, nataon'i Ian Stevenson
Alim-pandihizana nataon'i Ahmet Delibalta, trano fanaovana mofo ary vady silamo
Ahmet Delibalta dia teraka tao Adana, Torkia, ao amin'ny 1936. Nanambady vehivavy iray antsoina hoe Mihriban izy ary nanana zanaka telo niaraka taminy. Ahmet koa naka vady faharoa, Fehime, Turk iray izay Silamo ortodoksa.
Ahmet dia nanana toeram-pandihizana iray tao Adana antsoina hoe "Havuz" ary ny fandefasana ity klioba ity dia ny fitiavany. Nahazo an'i Ahmet tamim-pahamendrehana tsara i Havuz ary afaka nandoa trano lehibe iray sy voatendry izy. Ahmet ihany koa dia nanana fivarotana tao Adana.
Ahmet migadra taorian'ny fahafatesana
Tao amin'ny 1962 dia nandeha tany Istambul izy mba hitady mpihira vehivavy iray tao amin'ny toeram-pandihiziny. Ny vadiny faharoa, Fehime, dia bevohoka rehefa nandao an'io diakona roa herinandro io. Tany Istanbul, nifidy vehivavy iray antsoina hoe Rengin Arda i Ahmet ho mpihira azy. Tamin'ny March 8, 1962, dia nitondra an'i Rengin niverina tany Adana tamin'ny fiaramanidina izy. Indrisy anefa, ny fiaramanidina Turkish Airlines izay nirodana tao amin'ny Toros Mountains rakotra ranomandry. Noheverina fa maty noho ny fiantraikany ireo mpandeha.
Ny fanadihadiana nanaraka anefa dia nanambara fa nidina tany anaty ranomandry mena ny fiaramanidina, saingy tany amin'ny faritra lavitra, izay midika fa tsy afaka nanatratra ny fiaramanidina nidina nandritra ny andro maromaro ny mpamonjy voina. Ireo mpandeha izay tsy maty tamin'ilay fianjerana, anisan'izany i Ahmet, dia novonoina ho faty. Ahmet dia efa tokony ho 35 taona fony izy maty.
Amin'ny hadisoana, ny vatan'ny lehilahy jiosy iray dia raisin'ny fianakavian'i Ahmet
Tamin'ny fikarakarana ny vatana tamin'ny fianjerana, nisy hadisoana natao tamin'ny fanamarihana ny vatan'i Ahmet. Tamin'ny voalohany, ny vatan'ny mpandeha iray, izay Jiosy, dia fantatra amin'ny anarana hoe Ahmet. Nitranga izany rehefa tsy nety nijery ny vatany ny zandriny, satria nampalahelo azy ny fony. Nangataka kosa izy ny hampiseho fitafiana avy amin'ny vatana. Nanao fahadisoana izy, ka ny akanjon'ilay lehilahy Jiosy no nofidiny, toy ny akanjo izay an'i Ahmet. Ny fatin'ny lehilahy jiosy dia nalevina tao amin'ny toeram-pandevenana iray tamin'ny anaran'i Ahmet Delibalta.
Ny fahadisoana dia nipoitra rehefa nidina avy tany an-tendrombohitra ny vatana hafa. Ny iray amin'ireo vatana dia nanana karatra famantarana Ahmet. Ny fatin'ny lehilahy jiosy izay nogadraina tahaka an'i Ahmet dia voatery nesorina sy nalevina tany an-toeran-kafa.
Latife Kilic dia nipetraka tany Adana, Torkia, niaraka tamin'i Yusuf vadiny. Herinandro talohan'ny nianjadian'ny fiaramanidina Ahmet Delibalta, nanonofy izy. Tao anatin'ity nofy ity dia niseho i Ahmet Delibalta, izay fantatry ny Latifita tamin'ny fahitana, fa tsy tamin'ny olom-pantatra. Tao anatin'ilay nofy, nanome fanomezana azy i Ahmet ary natory teo am-pandriana teo anelanelan'i Latif sy Yusef. Rehefa nifoha izy dia nanontany ny vadiny i Latif:
"Inona no tadiavin'ity toeram-pandihizana amin'ny alina ity?" (1)
Latif dia bevohoka sy akaiky. Nandika ny nofy i Yusuf ka midika fa hanana zazalahy izy ireo. Tokony ho roa herinandro taty aoriana dia nanana tovolahy kely i Latifé, izay ho hitantsika fa toa ny fiverenan'ny vovoka indray Ahmet Delibalta.
Fiainana taloha Phobia: Erkan Kilic dia teraka miaraka amin'ny tahotra ny Airplanes
Erkan Kilic dia teraka tany Adana, Turky, manodidina ny andron'ny March 13, 1962, andro vitsivitsy monja taorian'ny fianjeran'ny fiaramanidina nahafaty an'i Ahmet Delibalta. Araka ny nomarihina, i Yusuf Kilic no ray aman-dreniny ary i Latife vadiny, izay Arabo. Erkan dia iray amin'ireo zaza 15 teraka tany Latife sy Yusuf. Yusuf niasa ho an'ny zanak'anabaviny, Zekeriya Kilic, izay nanana orinasa mpivarotra fitaovana elektronika. Yusef sy Latife dia nahantra.
Talohan'ny nanohanana an'i Erkan, dia nampiseho tahotra lehibe tamin'ny fiaramanidina izy, izay nahatonga azy hijery fiaramanidina na tamin'ny fihainoana ny milina. Tao anatin'izany toe-javatra izany dia nihazakazaka tany amin'ny reniny i Erkan na niafina teo am-pandriana. Nihasimba mandra-pahafatiny io tohodrano io.
Matetika ireo tranganà traikefa niainan'ny fiainana taloha no tratran'ny aretim-pivalanana. Raha toa ka Rashid Khaddege | Daniel Jurdi, I Daniel dia nanana karazana fiara mifindrafindra haingana, izay vokatry ny fahafatesany toa an'i Rashid Kaddege tamin'ny loza iray. Raha toa ka Anne Frank | Barbro Karlen, Barbro dia natahotra lehilahy nanao fanamiana, niainga tamin'ny fanenjehan'ny Nazi an'i Anne Frank. Samy Kaddege | Jurdi sy Frank | Ny tranga Karlen dia mampiseho izany Ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriny dia mety mitoetra hatrany amin'ny fiainana mandra-pahafaty. Ny Anne Frank | Ny tranga Barbro Karlen dia mampiseho fa afaka manao izany manova ny finoana sy ny zom-pirenena avy amin'ny fampodiana iray hafa.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Erkan dia nilaza tamin'i Latife fa Ahmet Delibalta izy & tsy tena reniny izy
Nanomboka niresaka i Erkan fony izy teo anelanelan'ny roa sy telo taona. Raha vao afaka niteny izy dia nilaza tamin'i Latife fa tsy reniny. Nangataka ny hitondra ny reniny sy ny vadiny izy. Nilaza ihany koa i Erkan fa Ahmet Delibalta no tena anarany, ary nanana toeram-pandihizana iray antsoina hoe "Havuz" izy ary koa fivarotana. Araka ny efa nomarihany, fantatry ny ray aman-drenin'i Erkan hoe iza i Ahmet Delibalta ary maty tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina izy, saingy nolavin'izy ireo ny hanana namana akaiky an'i Ahmet.
Ny trangan'ny zaza milaza ny reny biolojika fa tsy izy ilay renim-pianakaviana zaza, ary ny fangatahan'ny zaza horaisina any amin'ny reniny, dia mahazatra amin'ny tranga vao teraka indray avy amin'i Ian Stevenson. Ohatra iray hafa, amin'ny tranga Anne Frank | Barbro Karlen, Barbro kely ihany koa dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny fa tsy ray aman-dreniny izy ireo ary tsy ny tranon'izy ireo no fonenany. Nampahafantarin'i Barbro ny ray aman-dreniny biolojika fa tsy ho ela dia ho tonga ny ray aman-dreniny ary hitondra azy hody any amin'ny tranony tena izy.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Erkan dia manoratra ny fahafatesany ho an'i Ahmet Delibalta
Rehefa roa taona ka hatramin'ny telo taona i Erkan dia nitatitra ny antsipiriany momba ny fahafatesany nandritra ny fiainany taloha. Nolazainy tamin'ny reniny Latife, fa nandeha tany Istanbul izy mba hahita mpihira iray ho an'ny kliobany. Teny an-dàlana avy any Istanbul, nianjera ny fiaramanidina teny amin'ny tendrombohitra Toros.
Fantatr'i Little Erkan ihany koa fa izy, tahaka an'i Ahmet, dia tsy maty nandritra ny fianjeran'ny fiaramanidina. Nilaza kosa i Erkan fa maty noho ny hatsiaka izy taoriana kelin'izay. Ian Stevenson dia tena nampiaiky an'ity fanambarana nataon 'i Erkan ity, satria ny olon-drehetra mifandraika amin'ny tranga vao teraka dia mihevitra fa ny maty rehetra dia maty noho ny fiantraikany. Ireo izay tena mahazatra amin'ny fanadihadiana momba ny fianjerana dia nahafantatra fa nisy mpandeha, anisan'izany i Ahmet Delibalta, no tafavoaka velona tamin'ilay fianjerana ary novonoina tatỳ aoriana.
Ny Fanahy amin'ny sehatra gikan-jery: Ahmet, avy any amin'ny tontolon'ny fanahy, dia mitandrina ny fandavana ny vatany
Fantatr'i Erkan ihany koa fa nifangaro tamin'ny lehilahy jiosy iray teo amin'ny fiaramanidina ny vatany. Nitatitra ny rahalahin'i Ahmet fa tena nahamenatra azy ny fianakaviana Delibalta mikasika ity tranga ity ary niezaka ny nitazona azy. Noho izany, ny fifanjevoana momba ny vatana dia tsy dia fantatra loatra tany ivelan'ny fianakaviana akaiky. Araka izany, ahoana no ahafahan'i Erkan, amin'ny maha-zaza, io tsipiriany io?
Ny fahalalan'i Erkan momba ny fisafotofotoana momba ny maha-izy azy dia midika ihany koa fa taorian'ny nahafatesany, i Ahmet dia afaka nitandrina ny fanarenana ny vatana sy ny fisehoan-javatra izay nitarika ny vatana mangatsiaka nalevina tao amin'ny fasan'i Ahmet. Noho izany dia maneho ohatra iray izany Ny fanahy dia tafiditra ao amin'ny tranga vao teraka indray ao amin'ny vatana.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Erkan dia mamaritra ny fiainan'ny fianakaviana taloha
Rehefa roa taona ka hatramin'ny telo taona i Erkan dia nanao fanambarana mazava momba ny anaran'ny fiainany taloha. Nilaza izy fa fony izy mbola velona tahaka an'i Ahmet, ny rainy dia nantsoina hoe Yunus, ny reniny Emine, ny zanany Veysel sy Ali, ny zanany vavy Aysel, ny Turkan rahavaviny ary ny rafozan-janany Katibe. Tena marina ireo fanambarana ireo.
Nitatitra ihany koa i Erkan fa ny anaran'ny vadiny dia Mihriban ary nanana vady hafa antsoina hoe Fehime izy. Nilaza i Erkan fa tia an'i Mihriban i Fehime, izay nanamarina ny rafozambavin'i Ahmet.
Afaka namantatra ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'i Ahmet Delibalta ihany koa i Erkan. Nampahafantariny tsara ny vadin'i Ahmet, Mihriban, ary ny roa tamin'ireo zanak'i Ahmet, Veysel sy Aysel, tao anatin'ireto sary ireto. Tsy mazava raha efa nihaona tamin'i Mihriban i Erkan rehefa hitany ireo sary ireo, fa i Ian Stevenson kosa nahita ny famantarana an'i Veysel sy Aysel, toy ny ankizy madinika, mahavariana.
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana: i Erkan dia mahita ny lalany amin'ny vadiny, Mihriban ary ny fiainany taloha
Rehefa roa taona ka hatramin'ny telo taona i Erkan, dia naneho ny faniriany hitsidika toerana avy amin'ny fiainany taloha tahaka an'i Ahmet izy. Izy irery ihany no nandeha tany an-tranon'i Ahmet Delibalta, izay metatra 200 miala ny trano kilika. Ny mbola mpitondran'i Ahmet, Mihriban, dia mbola nipetraka tany. Tao, nampiditra ny tenany tamin'i Mihriban i Erkan.
Taorian'izay, fony i Latife niaraka tamin'ny anabavin'i Mihriban sy anabavin'i Mihribana, nanontany i Latife hoe iza no vadiny tamin'ny andro niainany. Raha tsy nisy fisalasalana, nanondro an'i Mihriban i Erkan.
Tamin'ny fotoana iray hafa, i Erkan dia nanjavona tanteraka tao an-tranon'I Kilic, izay niteraka fiakarana. Nahita azy tany amin'ny tranon'i Ahmet Delibalta ny ray aman-dreniny tatỳ aoriana, niaraka tamin'i Mihriban vadiny voalohany.
Rehefa nahita ny tranon'ny Delibalta i Erkan, dia nandeha matetika izy ary nijanona indraindray hatramin'ny 10 na 11 tamin'ny alina. Nisy mpikambana iray ao amin'ny fianakaviana kilika tokony handeha haka azy. Latife, renin'i Erkan, nahita ny fitsidihan'i Erkan matetika tany amin'ny tranon'ny Delibalta ka nalahelo mafy izy ka nanomboka nandratra azy mba hisakanana azy tsy handeha.
Rehefa hitondra ny zanany hitsidika ny rahavaviny i Mihriban, izay nipetraka tao amin'ny trano iray nanerana ny araben'ny fianakaviana Kilic, dia niakatra tany ambony tafo i Erkan ary nijery azy ireo. Rehefa nanontaniana ny zavatra nataony i Erkan dia nanazava fa "nijery ny vady aman-janany izy." Ian Stevenson dia nanamarika fa imbetsaka i Erkan no nitazona ny tafo mba hijery an'i Mihriban sy ny zanany. (2)
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana: nahita ny trano fehim-ponenana i Erkan, ny fiainany taloha tany am-piandohana
Indray andro, nanindry an'i Latife, reniny, i Erkan, fa te hitsidika an'i Fehime izy. Fantatr'i Latife fa nipetraka tao amin'ny trano fatoriany ny dokotera Fehima, ka nentiny tany amin'i Erkan izy ary nankany amin'ny varavaran'ny dokotera izy ary nanantena fa afaka mitarika azy ireo any amin'ny toerana nonenan'i Fehime. Tsy nody ny dokotera.
Erkan dia nitarika an'i Latife tamin'ny varavarana hafa tao amin'ny trano fonenana ary nandondona izany. Namaly i Fehime. Avy eo dia nametraka ny tenany i Latife. Fehime dia nahare momba ny filazan'i Erkan ho lasa vatana vaovao indray ao Ahmet.
Fehime dia nanontany an'i Erkan hoe: "Fantatrao ve aho?" (3)
Namaly i Erkan hoe: "Ianao no Fehime." (4)
Nanontany i Fehime hoe: "Inona no ifandraisako aminao?" (5)
Namaly i Erkan hoe: "Ianao no vadiko." (6)
Fehime dia nampiditra an'i Erkan tamin'ny tovovavy iray izay tao an-trano. Nanontany an'i Erkan izy raha fantany hoe iza izy.
Namaly i Erkan hoe: "Ahoana no ahafantarako azy hatramin'ny nisasaranao sy ny fijalianao?" (7)
Ahmet, amin'ny maha-Fanahy azy, dia mitandrina ny Fehim-pasika amin'ny asa
Fehime dia nanafaka ny zanany vavy roa andro taorian'ny nianjadian'ny fiaramanidin'i Ahmet tao amin'ny Toros Mountains. Ahmet, tsy maty tao anatin'ilay fianjerana, na dia tsy fantatra akory aza hoe hafiriana no niainany taorian'ny fianjerana. Na maty izy na velona, ​​dia hita fa nahavita nanara-maso ny fehim-pihetseham-po i Fehime.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha ara-jeografika: Nahita ny fiainany taloha sy ny trano fivarotany i Erkan
Ary indray, raha roa na telo taona monja i Erkan, dia nanontaniany ny reniny hoe Latife, raha afaka nitsidika ny reniny tamin'ny fiainany teo aloha tahaka an'i Ahmet. Hoy i Erkan:
"Afaka manoro anao ny lalana mankany amin'ny reniko aho." (8)
Navelan'i Latify nanandrana ny hahita ny lalana izy ary nanaraka azy izy mba hijery izay toerana halehany. Nitarika ny reniny tamin'ny metro 200 i Erkan nandeha an-tongotra mivantana tany an-tranon'ny renin'i Ahmet, izay teo akaikin'ny mofo fanaovan'i Ahmet.
Raha vao nahita ny mofo fanaova-mofo i Erkan, dia nitsidika azy matetika ary nilaza fa nanana ny fivarotana izy. Nisy mpanao mofomamy iray nino fa i Erkan dia ny fiverenana indray ao an-kibon'i Ahmet Delibalta ary nanome mofo azy. Ilay mpiasa dia nanasa an'i Erkan hamerina isaky ny mangataka mofo bebe kokoa.
Firaisana ara-jeografia taloha momba ny fiainana any amin'ny vatana vaovao
Maro ny raharaha momba ny fanambadiana any amin'ny vatana vaovao izay mampiseho ny trangan'ny zaza mahatsiaro ny lalana mankany amin'ny fiainana taloha. Ohatra, amin'ny raharaha Anne Frank | Barbro Karlen, tamin'ny folo taona i Barbro dia afaka nitarika ny ray aman-dreniny tao amin'ny làlana 10 kely avy tao amin'ny hotely any Amsterdam mivantana tany amin'ny Anne Frank House, na dia tsy tany avaratr'i Amsterdam mihitsy aza i Barbro.
Ny tranga toy izany dia hita ao amin'ny fizarana mitondra ny lohateny hoe: Fahatsiarovana jeografika
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Erkan dia manazava ny mpihira avy any Istanbul amin'ny sary
Rengin Arda, ilay mpihira maty niaraka tamin'i Ahmet teny an-dàlana avy any Istanbul, dia tany Adana taloha. Friseur Alemana iray dia nandeha naka sary nalaina niaraka tamin'i Regin tamin'ity fitsidihana teo aloha ity. Rehefa naheno ny fanambaràn'i Erkan fa ilay mpanankarena indray i Ahmet, dia tonga tao amin'ny tranon'ny Kulic ilay mpanety ny mpitsabo mba hanao ny fitsapany manokana.
Ny mpanety dia samy nipetraka daholo ary nangina. Navoakany avy eo ny sariny ary nasehony azy tany Erkan. Nanontany izy avy eo hoe iza ireo vehivavy ireo.
Namaly i Erkan hoe: "Ianao sy ilay mpihira." (9)
Nanontany an'i Erkan, ilay mpihira, ilay mpanety. Namaly avy hatrany izy hoe: "Rengin Arda." (10)
Ian Stevenson dia nanamarika fa famantarana manan-danja izany, satria tsy fantatry ny ray aman-drenin'i Erkan ny anaran'ilay mpihira.
Fiainana amin'ny fiainana taloha: i Erkan dia mpilalao tompon-trano, tompon-daka tamin'ny fiainana taloha
Tamin 'ny naha ankizy azy, te-hidera azy i Erkan fa nanana toeram-pandihizana izy. Ian Stevenson nanoratra hoe:
"Nahafinaritra an'i Erkan nilalao izy fa tompon'ny clubclub iray. Nandamina boaty izy mba haneho ny barany ary nametraka tavoahangy taminy. Nomeny andraikitra amin'ny tovovavy mpifanolo-bodirindrina izy ary nanome baiko iray hihazonana ny fisoloana mikrôfônin'ny mpihira. Indray mandeha, i Erkan dia nandinika ny fametrahana seza roa ho an'ireo vadin-dry Ahmet, Mihriban ary Fehime. "(11)
“Latife Kilic dia nanana fiheverana tamin'ny fijerena an'i Erkan nilalao ny lalao 'clubclub' fa aleony Mihriban noho Fehime. I Erkan mihitsy no nilaza tamim-pahatsorana tamin'ny taona 1970 fa aleony (tamin'ny fiainany teo aloha) dia i Mihriban no tian'i Fehime. ” (12)
Araka ny nomarihina teo aloha, ny fanamarihana nataon'i Latife sy ny filazan'i Erkan fa aleon'i Ahmet Mihriban dia nohamafisin'ny zaodahin'i Ahmet, Ihsan Ozbicer.
Ny fahalianan'i Erkan tany am-boalohany tamin'ny filalaovana clubclub dia azo jerena ho talenta na fitiavam-po izay avy amin'ny nofo taloha. Tranga reincarnation hafa maro no misy ankizy sy olon-dehibe maneho fihetsiketsehana talenta na tombontsoa avy amin'ny fahaterahana taloha.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha: Erkan dia mamaritra ny fijeriny amin'ny fiainany taloha
Raha mbola efa-taona i Erkan, dia nilaza izy fa tahaka an'i Ahmet, dia niova ny famantaranandro izy sy ny namana iray antsoina hoe Mithat ary mbola niambina hatrany i Mithat. Nilaza ihany koa izy fa ny nify dia nanana nify marika.
Ahmet Delibalta dia nanana namana antsoina hoe Mithat Goksal, izay nifandray tamin'ny filazan'i Erkan. Mithat nanamafy fa izy sy i Ahmet dia niova fijery tao amin'ny biraon'i Mithat. Nieritreritra i Mithat fa tsy dia nisy olona hafa afa-tsy i Ahmet sy Ahmet afaka nahalala momba io fifanakalozana io. Ian Stevenson dia nandinika ny fiambenana ary nahita fa misy marika maromaro ao anatin'ilay tranga famantaranandro, izay, nianatra, nataon'ireo zanak'i Ahmet.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha: Erkan dia mampahatsiahy ny fangalarana ny vilany
Nilaza i Erkan fa tahaka an'i Ahmet, dia nangalatra ny tranon-dreniny indray mandeha indray izy. Nilaza i Erkan fa nangalatra ilay lamandy izy mba hahazoany vola mba handehanana amin'ny lalao baolina kitra ary namidiny ny lany ho an'ny 25 kurus.
Ity tranga ity dia nanamarina ny naman'i Ahmet, Selim Ozel, izay mpiray tsikombakomba tamin'ilay halatra. Selim sy Ahmet dia te-handeha amin'ny lalao baolina kitra, saingy tsy nanam-bola firy i Ahmet. Nalainy ny plastika ary nivarotra izany ho an'ny 25 kurus mba hiditra ao amin'ny lalao baolina kitra. Izany dia nitranga tamin'i Ahmet 15 taona, taona 20 talohan'ny nahafatesany.
Rehefa nihaona tamin'i Erkan i Selim Ozel, ho fanandramana dia nanontany izy raha nisy olon-kafa nandeha niaraka taminy tany amin'ny lalao baolina kitra. Nilaza i Erkan fa nisy zazalahy fahatelo antsoina hoe Tevfic izay nandeha niaraka tamin'izy ireo, izay nohamarinin'i Selim ho marina.
Ian Stevenson nanamarika fa olona telo ihany no nahalala an'ity tranga ity, Ahmet, Selim ary Tevfic. Toy izany ihany koa ny fifanakalozam-pamokarana Ahmet sy Mithat. Amin'ny famoahana antsipirihany avy amin'ny fiainan'i Ahmet izay tsy dia mazava loatra, sarotra ny maka sary an-tsaina ny mety ho nahalalan'i Erkan ity fampahalalana ity afa-tsy tamin'ny alalan'ny fahaterahana indray andro sy ny fahatsiarovana ny fiainana.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nahaterahan'i Jesoa-Nateraka indray: Amin'ny maha-zaza azy, i Erkan dia milalao ny fiainany manokana amin'ny fiainany taloha
Nanjary naman'i Ahmet i Ahmet Delibalta, izay i Ali no anarany. Erkan sy Ali dia nanao tabataba be teo amin'ny lalao izay nanosika an'i Latife, renin'i Erkan, haniraka an'i Ali. Tsy hanajanona azy i Erkan, milaza fa "zanako" i Ali. (13)
Nomen'i Latify avy eo ary namela azy ireo hilalao. Ny mpifanila trano iray dia nanamarika fa hanaiky an'i Ali bebe kokoa toy ny ray aman-dreny i Erkan fa tsy mpilalao playmate.
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana: Teo anelanelan'ny taona roa sy telo, i Erkat dia afaka nahita ny làlany tany amin'ny fiainany taloha, izay nipetrahany sy ny fiainany taloha, i Mihriban. Ankoatr'izany dia afaka nahita ny trano nipetrahan'i Fehime, vadiny taloha, izy. I Erkat ihany koa dia afaka nahita ny trano izay niainan'ny reniny taloha.
Ny fahatsiarovana ara-jeografika dia naseho an-tsehatra koa tao amin'ny Anne Frank | Barbro Karlen raharaha momba ny harerahana, tahaka an'i Barbro tamin'ny faha-folo taonany dia afaka nahita ny Anne Frank House, tsy nisy lalana, tamin'ny diany voalohany tany Amsterdam.
Ny tranga iray hafa mahakasika fahatsiarovan-jaza dia midika fa ny neurosurgon dia Norm Shealy, MD, PhD, izay nentina tany amin'ny toerana izay nampiasany fitsaboana tany Angletera tamin'ny taonjato faha-19, nandritra ny fiainany taloha toa an'i John Elliotson.
Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Ahmet Delibalta indray no niorina indray i Erkan Kulic tao amin'ny ampahany iray tao Adana izay niainany tamin'ny fiainany teo aloha. Noho izany dia nanome malalaka ny fiainany tamin'ny fiainany taloha i Ahmet.
Nahafinaritra an'i Erkan ny niaraka tamin'ny fianakaviany taloha ka nanandrana nanakana azy tsy handeha ho any an-tranon'i Mihriban ny reniny. Tamin'ny endrika mampientanentana indrindra amin'ity tantara ity dia lasa mpinamana tamin'ny zanany lahy taloha i Ali i Ali. Niara-nilalao tamim-pifaliana i Erkan sy i Ali.
Mariho fa ny famerenana amin'ny laoniny amin'ny fomba iray izay ahafahana manangona indray ny fiainam-pianakaviana taloha dia mitaky ny fanomanana ny fanahy.
Fiainana taloha Phobia: Nanana tahotra lehibe tamin'ny fiaramanidina i Erkan. Rehefa hitany na naheno fiaramanidina iray izy, dia nihazakazaka nankany amin'ny reniny izy na nitsambikina teo am-pandriany. Nandritra ny androm-piainany teo aloha dia maty i Erkan taorian'ny fianjeran'ny fiaramanidina.
Vatana fanahy amin'ny raharaha momba ny Zandriny: Ity tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ity dia mampiseho ny fandraisan'anjaran'ny fanahy amin'ny fomba maro. Ahmet dia toa afaka nandinika ny toerana nitrangan'ny fiaramanidina taorian'ny nahafatesany, satria fantatr'i Erkan fa nifangaro tamin'ny fatin'ny lehilahy jiosy iray ny vatany, izay nalevina tamin'ny fasan'i Ahmet tamin'ny fomba diso.
Erkan koa dia nanao fanambarana fa ny vadiny, Fehime, dia niasa nandritra ny fianjerana. Niteraka i Fehime roa andro taorian'ny nidinan'ny fiaramanidin'i Ahmet. Satria tsy maty tamin'ny fianjerana i Ahmet, fa nihena ny ainy rehefa avy nilatsaka tamin'ny lanezy malefaka ny fiaramanidina, toa azo inoana fa maty i Ahmet raha mbola niasa i Fehime.
Ohatra iray hafa amin'ny zavaboary ara-panahy dia misy ny nofinofy nambaran'i Latife, renin'i Erkan. Tao anatin'ity nofy ity dia niseho i Ahmet Delibalta, nanome fanomezana azy ary avy eo nandry teo anelanelany sy ny vadiny. Toa avy amin'ny tontolon'ny fanahy, ny fanahin'i Ahmet dia nifandray tamin'i Latife fa ho teraka ho azy izy. Roa herinandro taty aoriana dia toa nateraka ho Erkan tokoa i Ahmet.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Erkan Kilic dia teraka andro vitsivitsy taorian'ny nahafatesan'i Ahmet Delibalta. Raha raisina ny hevitra fa ny fanahy dia tafiditra amin'ny fampandrosoana ny foetus, izay horesahina ao amin'ny fizarana momba ny Soul Evolution, ny fanahin'i Ahmet dia tafiditra tao amin'ny foetus Erkan nandritra ny sivy volana nateraky ny fitondrana, ary i Ahmet dia mbola velona.
Io tranga io ihany koa dia voamarika tamin'ny tranga manan-danja indrindra Hanan Monsour | Suzanne Ghanem, raha teraka 10 andro taorian'ny nahafatesan'i Hanan taorian'ny fandidiana ny fo i Susan. Ny Monsour | Ny tranga Ghanem dia mampiseho ihany koa fa ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriny dia mety mitovitovy amin'ny fiainana iray manontolo.
Ny endriky ny fanahy mitoetra mihoatra ny vatana iray amin'ny fotoana iray dia antsoina hoe fisarahana indray. Ny iray dia manontany tena raha amin'ny tranga tahaka an'i Hanan Monsour sy Ahmet Delibalta, ny fanahy dia mahafantatra momba ny hetsika fandevenana efa voalahatra ary manomboka ny fampidirana iray hafa amin'ny fialantsiny hamela ny iray hafa.
1. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 288
2. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 290
3. Stevenson, Ian: Ireo trangan-tsoratry ny fitsanganana indray ao amin'ny vatana, Boky III, Roambinifolo roambinifolo ao: Libanona sy Tiorkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 293
4. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 293
5. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 293
6. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 293
7. Stevenson, Ian: Ireo trangan-tsoratry ny fitsanganana indray ao amin'ny vatana, Boky III, Roambinifolo roambinifolo ao: Libanona sy Tiorkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 293
8. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana gospet, Boky III, Roambinifolo ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 289
9. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 285
10. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 285
11. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 292
12. Stevenson, Ian: Ireo trangan-tsoratry ny fitsanganana indray ao amin'ny vatana, Boky III, Roambinifolo roambinifolo ao: Libanona sy Tiorkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 292
13. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 290